Shiinaha Custom boorsadaada boorsada side soosaarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Boorsooyinka side bisada
1. Ayaa ubaahan boorsada bisad:
(1) Waxaan u maleynayaa in milkiile kasta oo eey yar leeyahay mid u baahan yahay!
Kahor intaanan ogayn inay jiraan waxaas oo kale, waxaan isticmaalay boorsada weyn ee cowska ma garanayo sida loogu qaado si sax ah labadoodaba waxaan dareemay raaxo-darro aad u weyn, waxaan u maleynayaa inay jiraan laba nooc oo ey ey leeyihiin oo aad uga faa'iideysan doona bisad. rucksack: reer magaal, dad firfircoon iyo dad aan socon karin waqti dheer.
(2) Haddii aad ku nooshahay magaalo sideyda oo kale aadna firfircoon tahay, markaa waxaad jeclaan laheyd inaad qaadatid boorsada bisada Hadda, si fudud ayaan baaskiil ula raaci karaa eeygaaga, u gey dukaanka raashinka (wuxuu ka cabanayaa walaac kala go 'ah , sidaa darteed ma haysto dooq aan ka aheyn inuu isaga ka tago dukaanka) ama inuu raaco gaadiid dadweyne.Marka aan xitaa u kaxeeyo qolkiisa qolka dhadhamiska khamriga.Waxaan dhigay kursiga keydka hoostiisa mana jirto cid xitaa dareentay. , waxaan ku qaadnay safar doon ah. Faa'iidada weyn ee ugu weyn ayaa ah inuu jecel yahay culeysyada ama xamuulka. Waa curler, sidaa darteed wuxuu jecel yahay inuu hoos u dhaco oo uu ku seexdo Meelo adag. Aad buu u fiican yahay.
(3) Waxaan u maleynayaa in bisadaha bisaduhu ay si gaar ah ugu habboon yihiin dadka magaalada leh eey yaryar. Gaar ahaan haddii aad u isticmaasho gaadiidka dadweynaha wax badan ama aad raacdo baaskiil, waa inaad soo qaadataa shandad. Xitaa haddii eeyaha aan loo oggolaan karin gaadiidka dadweynaha, Waxaan arkaa xalkan inbadan sababtoo ah uma baahnid baabuur aad leedahay eey. Bacda eyga ayaa kaliya kadhigi doonta mid dabacsan. sidoo kale waa waajib.
Ey aan socon karin waqti dheer.
(4) Sidee kooxda labaad ee milkiilayaasha eyda ay u leeyihiin eeyo aan socon karin waqti dheer.Haddii aad jeceshahay socodka, laakiin rucksack ma ku raaci karo adiga maalinta oo dhan, markaa markabka xamuulka qaada ayaa ah xalka ugu fiican.
Haddii aad leedahay laba eey oo hal eey u baahan tahay jimicsi ka badan kan kale, tani sidoo kale waa xal wanaagsan.
2. Xuduudaha sheyga boorsada bisadaha (qeexitaanno)
Daabacaadda maro Oxford ah
1 badeecad ku jirta bac caag ah, 10 shey oo kartoon ku jira
3. Sida loo doorto boorsada ey ku habboon socodka
(1) Kuwa sidayaasha ah waxaa loo isticmaali karaa sidayaal caadi ah Waxay sidoo kale kufiicanyihiin xaaladaha eygaagu kujiro gaari (sida qolka diyaaradda ama gaadiidka dadweynaha) ama waa inaan la arkin (sida dukaanka cuntada).
Waxay kuxiran yihiin dhinac kasta waxayna badanaa leeyihiin qaybo ka samaysan waxyaabo mesh ah ujeedooyin hawo leh, eeygaaguna wuu eegi karaa.Haddii ilmahaagu yar yahay, si fudud ayuu ugu dhex wareegi karaa qolkaani. Baloo xitaa wuu istaagi karaa, wuu fadhiisan karaa si raaxo leh oo jiifso. Badanaa, waxaad kaloo furi kartaa qeybaha kore iyo hore, waxaad ku dhejin kartaa qoorta eyga xadhigga la siiyay, oo madaxa eeyga ha u daayo sida loogu baahan yahay.Sidaas darteed kuwani runtii waa kuwa ugu dabacsan.
(2) Wadayaasha "Madaxa kor", kuwani waa sidayaal aad u jilicsan oo ka xidhan xagga hoose laakiin leh godad dusha sare si eeygaagu had iyo jeer markasta madaxiisa ugala baxo. Waxaa jira xadhig la isku hagaajin karo oo dusha sare ah si eeygaagu uusan banaanka ugu boodin. Waa kan tusaale: Hadda, anigu taageere weyn uma ihi dadkaas ...
(3) Si kastaba ha noqotee, haddii eeyahaagu aad u dabacsan yahay, tani waxay noqon kartaa xalka wanaagsan.Waxaa kaliya loogu talagalay eeyaha culeyskoodu yahay 15 rodol (6. 8 kiilo garaam) ama ka yar. Sidoo kale, waa in loo adeegsadaa masaafo gaaban. Eygaaga ayaa laga yaabaa aad u kululaado gudaha maxaa yeelay marada ku hareeraysan oo dhan, Qeyb ahaan, ma dhaqaaqi karo, laakiin wuxuu ku dhegan yahay booskan. Aad ayey faa'iido u leedahay maxaa yeelay waa mid jilicsan oo si fudud ayaad isugu laaban kartaa.
(4) Adag: Baabuurta afka leh iyo kuwa jilicsan labadaba, waxaad dooneysaa inaad hubiso in gaariga qaab dhismeedkiisu hagaagsan yahay uuna leeyahay taageero gudaha ah oo ku habboon si looga hortago in gaariga uu ku dul dhaco eeyga. Hubso inaad hubiso koonayaasha iyo dunta waa la xoojiyay, iyo inay xitaa jiifsan karto dhulka iyadoo aan foorarin, taas oo si dhakhso leh uga xanaajin karta eygaaga.
(5) Dabeecada xayawaankaaga
Mid ka mid ah waxyaabaha aan doonayo inaan ka fiirsado ka hor intaanan iibsanin gaadiid jaban eeygeygu waa dabeecaddiisa. Kaliya ma ahayn inuu warqad buuxiyo, laakiin wuxuu ahaa mid guud ahaan walwalsan. si fiican ugama shaqeyn eey aan rabin inuu la xiriiro side sideedii hore.Waxaan u maleynayaa in xulashada ugu sareysa ee wax soo saar ay ka dhigeyso habka rarku mid aad u jilicsan.
Sidoo kale, haddii aad ogtahay inaad leedahay eey welwel leh, markaa waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso inaad arki karto aragti ka yar ama ka yar. Eyda qaarkood waxay runtii jeclaan karaan furitaanka markabka xamuulka, halka kuwa kale ay ku fiicnaan karaan deegaan gaar ah, kiiskee waxaad u baahan doontaa inaad raadsato sidayaal wata daaqadaha Windows.
Qaar badan oo milkiileyaasha gawaarida ah waxay ubaahan karaan xamuul sabab gaar ah, sida socdaalka, duulista, socodka, iwm, laakiin kuwa kale waxay ubaahan karaan xambaara ujeedooyin badan. boorsooyinka boorsada, ama suurto gal inay leeyihiin giraangiraha gadaal gadaal u jiidaya.
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: 43 * 23 * 34cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 45cm X 50cm X 50cm.10 PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 18KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 16KG.
A: Waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno iimaylkaaga baaritaanka
J: (1) Soosaarkeena maalinlaha ah ee boorsooyinka fudud waa 50,000, waxsoosaarka billaha waa 1.5 milyan
(2) howshu waa soosaaris adag oo maalinle ah oo 3000, 100,000 soosaar bille ah
A: & lt; = 1000USD, 100% bixinta kahor
J: (1) Waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka bixiso khidmadda degdegga ah ee Shiinaha illaa waddankaaga
(2) 7-10 maalmood oo shaqo oo shaybaarro la qaabeeyey ah iyo 48 saacadood oo tijaabo ah
Jawaab: Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 500-1000 waa 30-35 maalmood
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 1000-3000 waa 35-40 maalmood
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 3000-5000 waa 40-45 maalmood
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 5000-10000 waa 45-50 maalmood
Wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan waa in lagu hagaajiyaa iyadoo loo eegayo heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibaatada alaabooyinka la habeeyay.
Calaamadaha kulul: Boorsada side cat, Shiinaha, saarayaasha, shirkado, warshad, kartoo, qiimaha, oraah, in stock